वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाए स्वीकार्य हुँदैनः देवेन्द्र पौडेल - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > अन्तरवार्ता > वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाए स्वीकार्य हुँदैनः देवेन्द्र पौडेल
वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाए स्वीकार्य हुँदैनः देवेन्द्र पौडेल
March 26, 2020 March 26, 2020 GRISHI220
आवश्यकता बाध्यता भन्दा पनि हामीले निर्णय गर्ने ठाउँ हो । त्यसलाई आवश्यकताको रुपमा बुझ्नुस् या बाध्यता । वामदेव जतिको व्यक्तित्व राष्ट्रियसभामा हुँदा ठिकै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुग्यो ।
जनताले त उहाँ नरुचाएको नेता हो नि !
त्यो चाँही अर्को राजनैतिक भित्रको नैतिकताको एजेण्डामा समिक्षा हुने विषय हो । त्यसो भन्न मिल्दैन किनभने निर्वाचनको प्रक्रियामा गएका सबैको जित हार हुन्छ । पराजित भएका नेताहरुलाई जनता र कायृ्ृकर्ताले अस्वीकार गरेका भनेर मान्नुहुँदैन ।
त्यो आप त्तिज नक हो । अहिलेकै बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि कुनै बेला पराजित हुनु भएको थियो । फेरी उहाँ आफ्नै एजेण्डा लिएर जानुभयो । पार्टीमा र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उहाँले जित्नुभयो । त्यसकारण यो चुनावलाई नै रुचाएको/नरुचाएको आर्थमा लिनुहुँदैन ।
त्यसो भए वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रियसभामा लैजानु कतिको उचित छ ?
त्यो चाँही मलाई उचित हो भन्ने लाग्दैन । प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति हामीले निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौं । व्यक्ति विशेषका व्यक्तिगत चाहानालाई संविधान संशोधन गर्ने कुरा राम्रो होइन । तर, व्यक्ति विशेष (वामदेव) लाई फास्ट ट्र्याकबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पार्टीका नेताहरुले स्वीकार गर्दैनौं ।
वामदेवलाई भन्नेहरुले हामी सबै एकपटक भयौं तपाई पनि एकपटक प्रधानमन्त्री हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर कतिपयले भनेको हुँदा उहाँले कहिलेकाँही मैले पनि जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो ।
राजनीतिमा उहाँले त्यो चाहना किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्न राखे भने उहाँले पनि राख्नुभयो । तर, फेरी पनि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेको होइन । राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरा भएको हो ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलता अपनाइरहेका बेला स्वंय मन्त्री नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् नि !
नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै कन्ट्रोल हुँदै गएको छ । मैले तथ्य दिन सक्छु । भ्रष्टाचार गर्नै व्यक्तिहरु प्रमाणित भइसकेपछि प्रमाणि नभइ चाँही होहल्लाको रुपमा यी कुराहरु अलग भयसकेका हुन् । भ्रष्टाचार यो एजेण्डा, यो विषय, यहाँ भएको हो भनेर प्रमाणित भएपछि कही पनि लुकेको ठाकेको छैन् । गोकुजीको विषयमा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ ।
उहाँले लिएको भन्ने मात्र आएको छ ठहरिएको छैन् । फेरी पनि अनावश्यक रुपमा हल्लाको पछि लागेर बोल्नेकुरा भएन ।
उहाँले नैतिकताका आधारमा अडियोमा भएको टेपले योसित सम्बन्धित भएको कुरा कही न कही आउँछ भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको हुँदा नैतिकताका आधारमा छानबिनमा सहयोग पुर्याउन उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
चुनावताका नेकपासँग जनताहरुको धेरै आशा थियो । तर, नेताहरुको काम गराइको अवस्था हेर्दा जनता निराश बन्दै गइरहेका छन् । नेताहरुले जनतासँग गरेको बाचा भुलेका हुन् ?
अलिअलि त्यस्तो सुन्ने गरिएको छ । तर, सबै भोग विलासमा लागेर जनताको काम छोडे र अर्कै संसारमा गइसके भन्ने चाँही पूर्ण सत्य होइन ।
अहिले पनि निकै मिहिनेत गरे तलसम्म पार्टी बनाउने पार्टीका साथीहरुलाई उर्जाथप्ने, विकास निर्माणका काममा हिँडिराख्ने काम पार्टीका साथीहरुले गरिराख्नु भएको छ । तपार्यले भनेजस्तै अझ बढी सुदृढीकृत भएर जनताको पक्षमा अझै बढी कामहरु गर्नुपथ्र्यो । पुगेन कि भन्ने कुरा गुनासोको रुपमा आएका छन् ।
प्रशंग बदलौं, विश्वभरी नै महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसलाई देखाएर व्यापारीहरुले कृतित्र अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेका छन् । कालोबजारी रोक्न सरकारले के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकराले सचेततापूर्ण सचेतना अपनाउने जागरण ल्याउने र अर्को समूहमा यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्नुका निम्ति नियन्त्रण गर्ने, त्यसको पक्षमा जागरण ल्याउने र विभिन्न क्षेत्रका स्वास्थ्य निकायहरु(ठूला अस्पताल )लाई क्षमता थियो यसलाई अझै बढाउन निरन्तर प्ररित गरेर निर्देशन गर्ने ।
र विदेशमा रहेका यो मामलामा अफ्ठेरोमा परेकाहरुलाई सकुशल ल्याउने र उनीहरुलाई हामीसँग भएको प्रविधिले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरुलाई पठाउने जस्ता सकारात्मक कामहरु पनि गरेका छौं । त्यसकारण पनि हामी अहिले नियन्त्रित छौं । तर, आवश्यकभन्दा बढी आतंकको रुपमा भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने र एक जनालाई पनि अहिले पोजेटिभ देखिएको छैन् ।
अरेअरेको आधारमा हल्ला फैलाउने, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैछ रेर भनेर हल्ला फैलाउने र दैनिक उपभोग्यवस्तुहरुको अभाव सिर्जना गर्ने कामहरु पनि यतिबेला भएको छ । त्यो सही छैन् । अहिले बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको हो ।
एक जना व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास थुपारेका कारण यस्तो अवस्था भएको हो । ग्यास आउन अभाव भएको छैन् ।
कोरोना भाइरसको संक्र मणबाट जोगिन नेकपाले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ ?
पार्टीले सर्कुलर जारी गरेर देशै भरी सचेतना मुलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । नेताहरु आफू पनि सतर्क रहने र जनतालाई पनि सतर्क रहन सचेतना अभियान चलाइरहेका छौं ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय अन्तराष्ट्रिय यी सित सम्बन्धित निकायहरुले दिएको निर्देशनहरु पालना गर्ने र अहिले चाँही भेला गर्ने ठूल्ठूला सभा गर्ने होइन कि कोरोना भाइरसबाट जनतालाई सतर्क रहन जागरुक रुपमा भूमिका खेल्ने भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।
तर, सरकारले विद्यार्थीको ठूलो मात्रामा जमघट हुने क्षेत्र विद्यालय किन बन्द नगरेको त ?
कुनै पनि बेला निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार बसेको छ । खासगरी परीक्षाको समय भएकाले त्यसलाई प्रभाव पर्ने भएका कारण सरकार सचेत भएको हो ।
विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव आएका छन् । विद्यालय कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्छन् । कोरोना आयो आयो भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाएर डर सिर्जना काम गर्नु भएन । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन् ।
त्यो कारणले सरकारले सामान्य रुपमा जनविन चलिरहोस भनेर यस्तो गरेको हो ।
पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिं,सा त्मक गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । केही समय अगाडि पूर्वमन्त्री गोकु बाँस्कोटाको घरमा वि,स्फो,ट गरायो । पूर्वसहकर्मीको नाताले विप्लवलाई के भन्नुहुन्छ ?
आजको अवस्थामा त्यस प्रकारका गतिविधिहरु असह्यै प्रकृतिका हुन् । किनभने विभिन्न संवैधानि निकायहरु सक्रिय छन् । भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गर्नै विभिन्न पद्धतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यदी कसैले त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलापमा आफूलाई सहभागी बनाएको रहेछ भने कानुनले नै दण्डित गर्नै विधिहरु छन् । तर, ति विधिहरु प्रयोग नगरी अलिक आ,तंक सिर्जना गर्ने प्रकृतिका गतिविधि गरेर आफूलाई त्यो प्रकारले प्रकट गर्नु आजको जमानाको माग त्यो होइन ।
विप्लवजी सापेक्षित रुपमा एक सक्षम युवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यस प्रकारका गतिविधिको समीक्षा गरेर नेपालमा भइरहेको वमपन्थीहरको एकता प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो क्षमता योग्यता प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
अन्त्यमा, सरकारले गरेका कामको विषयमा केही विश्लेषण गरौं न !
हामीलाई जनताले दुई तिहाई दिएर पठाएका छन् । जनताले केही असन्तुष्टी जनाएको साँचो हो । हामी निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि जनताले त्यस्तै गुनासो गर्छन् ।
तर, सरकारले कामै गरेन भन्ने निष्कर्षमा म छैन् । सरकारले बाटोघाटो, पूर्वाधार, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनेका कामहरु, ठूलाठूला बाटोघाटो निर्माण गर्नै कामहरु, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट हिजो भूकम्पका कारण क्षति भएका पुर्ननिर्माका कामहरु यी कतिपय कामहरु हामीले एक गतिले अगाडि बढाइरहेका छौं ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, धरहरा, नारायणगढ–बुटवल बाटो बन्दैछ । विभिन्न ठाउँका सुरुङ मार्गहरु निर्माणको प्रक्रियामा छ ।
थानकोट सुरुङको काम प्रक्रिया नै अगाडि बढी सक्यो । यी कतिपय कुराहरु हेर्दा पूर्वाधारका कामहरु तिव्र रुपमा अगाडि बढेका छन् ।
तर, नभएको काम भनेको चाँही व्यापार घाटा कम गराउने र रोजगारी सिर्जना गराउने काम भएनन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम नहुँदा जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टी बढेर गयो ।
र आगामी बजेट नीति कार्यक्रमदेखि भौतिकपूर्वाधारको कामका साथसाथै युवाहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्ने काममा उल्लेख्य रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ त्यो हँुदा सरकारको काम सापेक्षित रुपमा अगाडि बढेको तपाई हामीले बुझ्ना सक्छौं ।
कोरोनाको कारण सर्यो युरोकप फुटबल
September 25, 2020 September 25, 2020 News Desk